Jereo ny aretina mahazatra ao amin'ny alika beagle | Tontolo alika
Susy fontenla | | aretina, Taranaky ny alika
Ny alika purebred rehetra dia misy a génétique izay mahatonga azy ireo mora voan'ny aretina sasany, izay matetika no iraisan'ny karazany. Ny zava-misy fa mahazatra izy ireo ary mety hampivelatra azy ireo noho ny alika hafa dia tsy midika hoe hijaly amin'ireo aretina ireo izy ireo, fa amin'ny maha-tompona azy dia tsy maintsy fantatsika izy ireo mba hihaino tsara ireo soritr'aretina mety hitranga.
Ao amin'ny Ny alika beagle dia mahita pathologies ihany koa izay mahazatra indrindra amin'ny karazany. Alika efa niasa ara-dalàna izy io tamin'ny fihazana ary manana fahasalamana somary matanjaka, saingy tsy manakana azy io fa mety harary koa izy ary manana olana sasany, indrindra rehefa lasa alika antitra izy ireo.
1 Alika beagle
2 Aretina Beagle mahazatra
2.1 Aretina maso
2.3 Aretina mitambatra sy hazondamosina
2.4 Aretina hafa
Ny karazana Beagle dia avy any Angletera ary alika kely volo izy na kely volo aza, ka heverina ho antonony ny habeny. Matanjaka izy io ary tena alika mahery, satria rehefa ampiasaina amin'ny asa fihazana dia ny alika matanjaka sy mahery indrindra ihany no voafantina, manadio ny karazany ary mahatonga azy io ho iray amin'ireo matanjaka indrindra manoloana ny olana na aretina. Mahagaga ny fiaretana azon'alika alika Beagle, indrindra satria tsy dia lehibe loatra izy ireo, nefa mahery fo.
Aretina Beagle mahazatra
Toy ny amin'ny firazanana rehetra dia tsy maintsy fantaro ny mampiavaka ny alika ary ambonin'izay rehetra hahafantarana izay aretina mety hijaly, satria mandritra ny taona maro dia mety mila miatrika azy ireo isika ary mahafantatra azy ireo haingana hampihatra ny fitsaboana haingana araka izay tratra.
Alika beagle amin'ny ankapobeny mety hijaly amin'ny fahitana izy ireo. Matetika ny katarakta dia alika somary antitra ary azontsika fantarina satria lasa manjavozavo kokoa ny maso eo afovoany, mandra-pahajambany. Amin'ny ankapobeny dia zavatra mitranga matetika amin'ny alika taloha izy io ary miharatsy rehefa mandeha ny fotoana. Mety manana displasia retina koa izy ireo, izay miteraka fahajambana amin'ny alina ary mety hahatonga jamba ny alika. Ny aretina iray hafa mety hananan'izy ireo dia ny glaucoma, izay mitombo ny tsindry amin'ny maso, mitarika fahaverezan'ny fahitana. Mba hisorohana ny alika tsy hamorona ireny aretina ireny nefa tsy fantatsika dia tsara ny manao fanamarihana tsindraindray any amin'ny mpitsabo biby.
Alika beagle manan-tsofina floppy lehibe. Izany dia mahatonga azy ireo ho mora zaka aretin-tsofina, zavatra matetika ialana amin'ny alika mampiakatra ny sofina, satria an-drivotra no ananan'izy ireo. Raha tsikaritrareo fa manaloka ny lohany ilay alika ary sosotra rehefa mikasika ny sofiny ianao dia mety misy areti-mifindra ao aminy. Mba tsy handehanana bebe kokoa ity dia ilaina ny mitondra azy any amin'ny mpitsabo biby mba hijerena ny niandohan'ny olana ary manome azy ireo nilatsaka kely hanadiovana ny sofina sy hamaranana ny aretina. Amin'ny ankapobeny dia azontsika atao ny misoroka ireo aretina ireo raha manadio ny sofin'ilay alika isika indraindray amin'ny serum kely sy ny gazoala madio.
Aretina mitambatra sy hazondamosina
Ny alika beagle dia afaka mandova aretina roa izay hiteraka olana amin'ny fandehanana. Iray amin'izany ny dysplasia epiphyseal marobe Miteraka fanaintainana izany ary mampihena ny fivezivezena amin'ny tongony aoriana. Ny iray hafa dia ny aretin'ny disc intervertebral, izay misy olana eo anelanelan'ny hazondamosin'ny hazondamosina izay mampihena ny fivezivezena ary mitarika fivontosana mihitsy aza.
Ny aretina hafa dia mety hitranga any Beagles. Mifandraika amin'ny hoditra no ahitantsika pyoderma, aretina mikraoba izay misy fiantraikany amin'ny faritra sasany, toy ny taovam-pananahana na ny faritry ny rambony. Afaka koa ireto alika ireto voan'ny androbe, aretina iray misy fiatraikany amin'ny rafi-pitabatabana. Izy ireo koa dia mora tohina amin'ny olan'ny lanja ary mety hitarika amin'ny hatavezina, satria vonona ny hiasa be izy ireo, ka tsy maintsy hikarakara ny sakafony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Aretina mahazatra amin'ny alika beagle
Laura Crusoe dia hoy izy:
Manana alika voromahery 14 taona aho ary nesorin'izy ireo ny taolany satria nanana fivontosana izy, inona ny vinavinan'ny fiainana?
Mamaly an'i laura crusoe